आज फागुन १० गते कुन व्यक्तिको भाग्य कस्तो - Muldhar Post
आज फागुन १० गते कुन व्यक्तिको भाग्य कस्तो
दैनिक राशिफल २०७७, १० फाल्गुन सोमबार 187 पटक हेरिएको
आज मिति २०७७ साल फागुन महिनाको १० गते सोमबार । मेष-पिउने बानीबाट छुटकारा प्राप्त गर्नको लागि आज धेरै शुभ दिन हो। तपाईंले रक्सी पिउनु स्वास्थ्यको लागि घातक शत्रु हो भनेर बुझ्नु पर्छ र यसले तपाईंको दक्षता पनि घटाउँछ। अनपेक्षित सुसमाचारले तपाईंको हौसला बढाउनेछ। आफ्नो परिवारका सदस्यहरूसँग समाचार सुनाउनाले उनीहरू पनि खुशी हुनेछन्। आफ्नो प्रिय वा जोडीबाट राम्रो सञ्चार वा सन्देशले आज तपाईंको हौसलामा बृद्धि गर्नेछ। कुनै पनि साझेदारी गर्नु अघि आफ्नो भित्री भावनालाई ध्यान दिनुहोस्। आफ्नो जीवनसाथीले तपाईंलाई सबैभन्दा खुशी व्यक्ति बनाउन आज धेरै प्रयास गर्नेछन्।
वृष-आफ्नो वजनमा ध्यान दिनुहोस् र धेर नखानुहोस्। तपाईंले तिनीहरूलाई खुसी पार्न जति गरेपनि – तपाईंसँग बस्ने मानिसहरू तपाईंसँग धेरै खुसी रहने छैनन्। तपाईंकी प्रियतमाले पूरा दिन नराम्ररी तपाईंको सम्झना गर्नेछिन्। एउटा आश्चर्य मिलाउनुहोस् र यो दिनलाई आफ्नो जीवनको सबैभन्दा सुन्दर दिन बनाउनुहोस्। खुशीसँग व्यापार नमिसाउनुहोस्। घरमा संस्कार / हवन / शुभ समारोह गरिनेछ। आफ्नो जोडीले आज तपाईंलाई केही साँच्चै सुन्दर कुराले आश्चर्य गराउनेछन्।
मिथुन-स्वयं चिकित्सा गर्नाले दबाइको निर्भरता हुन सक्छ। कुनै पनि दबाइ लिनु अघि चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस् – अन्यथा दबाइका निर्भरताको सम्भावना उँचो छ। छोराछोरीका चासाको चिन्ता गर्नु आवश्यक हुनेछ। रोमान्सको लागि धेरै राम्रो दिन होइन किनकि तपाईंले साँचो प्रेम पाउन सक्नु हुनेछैन। तपाईंको कामको पर्यावरण आज राम्रो कार्यमा परिवर्तन हुन सक्छ। आफ्ना जोडीको नराम्रो स्वास्थ्यले तपाईंको काममा रोकावट उत्पन्न हुन सक्छ, तर तपाईं कुनै पनि तरीकाले सबैको व्यवस्था गर्न सक्नु हुनेछ।
कर्कट-तपाईंले लामो समयदेखि अनुभव गरिरहेको जीवनका तनाउ र खिचलोबाट राहत प्राप्त गर्नु हुनेछ। यिनीहरूलाई स्थायी रूपमा निकाल्न तपाईंको जीवन शैली परिवर्तन गर्ने सही समय हो। त्यसै बसिरहनु भन्दा पैसा कमिने केहीमा किन संलग्न हुनुहुँदैन – यसले तपाईंको कमाउने शक्तिमा सुधार हुनेछ। तपाईंका नजिकका मानिसहरूले व्यक्तिगत स्तरमा समस्या सिर्जना गर्नेछन्। आफ्नो प्रेमीलाई मन नपर्ने लुगा नलगाउनुहोस् किनकि यसले उनको चित्त दुखाउनेछ। व्यापार सभाहरूमा फरासिलो र भावनात्मक नहुनुहोस् – तपाईंले आफ्नो बोली नियन्त्रण गर्नु भएन भने सजिलैसँग आफ्नो प्रतिष्ठा बिगार्न सक्नुहुन्छ। अनपेक्षित अतिथिको कारणले तपाईंको योजनामा बाधा पर्ने सक्छ, तर यसले तपाईंको दिन राम्रो हुनेछ।
शिंह-खुल्ला खाना खाँदा विशेष सावधानी लिनुपर्छ। यसको लागि तपाईंले अनावश्यक तनाउ नलिनुहोस् किनकि यसले मानसिक तनाउमात्र दिनेछ। ठूलो समूहमा आफूलाई संलग्न गराएमा अत्यधिक मनोरंजक हुनेछ – तर तपाईंको खर्च भने धेरै माथि पुग्नेछ। मित्र र परिवारका सदस्यहरूले तपाईंको अधिकांश समय लिनेछन्। आफ्नो ऊर्जा र आवेगको कायापलट गर्न खुशियाली यात्रामा जाने सम्भावना छ। रिटेलर र थोक व्यापारीहरूको लागि राम्रो दिन। यो दिन तपाईंको नियमित वैवाहिक जीवनमा विशेष दिन हो; तपाईंले आज साँच्चै असामान्य केही अनुभव गर्नु हुनेछ।
कन्या-तपाईंको डाह गर्ने व्यवहारले तपाईं दुःखी र निराश बनाउन सक्छ। यो स्वयं लगाएको चोट हो र यसैले यस बारेमा विलाप गर्नु कुनै आवश्यकता छैन। अरूलाई आनन्द र दुख बाँडेर यसबाट छुटकारा प्राप्त गर्न आफैलाई प्रोत्साहन गर्नुहोस। आज लगानी गर्नबाट बच्नुपर्छ। मित्र र आफन्तहरूले सहायता गर्नेछन् र तपाईं तिनीहरूसँग एकदम खुसी हुनुहुनेछ। तपाईं आज आफ्नो साथीको धुकधुकीसँग समन्वयन हुनुहुनेछ। हो, यो तपाईं प्रेममा हुनुहुन्छ भन्ने चिन्ह हो! आज तपाईंले गरेका सबै कामका मेहनतको भुक्तानी हुनेछ। तपाईं र तपाईंको जोडी आफ्ना साना मुद्दाहरूमा झगडा गर्नुहुनेछ तर यसले पछि गएर तपाईंको विवाह बर्बाद हुन सक्छ। अरूले भनेका वा सुझाव दिएका कुरामा भरोसा नगर्नुहोस्।
तुला-केही मानिसहरूलाई तपाईंलाई बूढो भयो नयाँ कुरा सिक्दैन भन्ने लाग्न सक्छ – तर यो साँचो होइन – किनभने तपाईंले सजिलै आफ्नो तेज र सक्रिय मनले नयाँ कुरा सिक्नु हुनेछ। अनपेक्षित अतिथिले साँझ तपाईंको घरमा भीड लगाउनेछन्। आफ्नी प्रियतमालाई बुझ्ने गर्नुहोस्। आज तपाईं उपस्थित भएका व्याख्यान र सेमिनारले विकासको लागि नयाँ विचार ल्याउनेछन्। यो दिन तपाईंको नियमित वैवाहिक जीवनमा विशेष दिन हो; तपाईंले आज साँच्चै असामान्य केही अनुभव गर्नु हुनेछ।
वृश्चिक-आफ्नो तनाउबाट राहत पाउनको लागि परिवारका सदस्यहरूको सहायता लिनुहोस्। तिनीहरूको मद्दत अनुग्रहपूर्वक स्वीकार्नुहोस्। तपाईं भित्र भावना र दबाब भरिनु हुँदैन। प्रायजसो आफ्नो समस्या साझेदारी गर्नाले तपाईंलाई मद्दत गर्नेछ। आज तपाईंलाई केही समस्याको सामना गर्नु पर्नेछ – तर व्यावहारिक हुनुहोस् र सहयोग गर्ने मान्छेबाट चमत्कारको आशा नगर्नुहोस्। प्रेम यात्रा मीठो तर छोटो हुनेछ। आज काममा सबैले इमानदारीसाथ तपाईंको कुरा सुन्नेछन्। आज तपाईं वा तपाईंको जोडीलाई ओछ्यानमा चोट लाग्न सक्छ, त्यसैले एक-अर्कासँग नम्र हुनुहोस्।
धनु-भावनात्मक रूपमा तपाईं धेरै स्थिर हुनु हुँदैन – त्यसैले अरूको अगाडि कसरी व्यवहार र कुरा कसरी गर्नु भन्ने ध्यान राख्नुहोस्। बढी खर्च र शंकास्पद वित्तीय योजनाहरु नगर्नुहोस्। तपाईंले मद्दत गर्नु पर्ने परिवारका सदस्यहरूको लागि यस समयको फाइदा लिनुहोस्। यो अन्य देशहरूमा व्यावसायिक सम्पर्कका सुधार ल्याउने एउटा उत्कृष्ट समय हो। कार्यक्रमहरू राम्रा र समस्यापूर्ण हुने दिन – जसले तपाईंलाई भ्रमित र थकित छोड्नेछ। नियमित रूपमा आफ्नो जीवनसाथीलाई चकित गराउनुहोस्; अन्यथा उसले महत्वहीन महसुस गर्न सुरु गर्न सक्छ।
मकर-सबैको मद्दत गर्ने तपाईंको इच्छाले तपाईंलाई थकित र शक्तिहीन बनाउनेछ। अनपेक्षित जिम्मेवारीले तपाईंको दिनको योजना विग्रिनेछ – तपाईंले आफैलाई अरूलाई धेरै र आफ्नो लागि कम गरिरहेको पाउनुहुनेछ। कठिन प्रयास गर्नुहोस्, तपाईं निश्चित भाग्यमानी हुनुहुन्छ किनकि आज तपाईंको दिन हो। नयाँ विचारहरू फलदायी हुनेछन्। आफ्नो जीवनमा पछि गएर पछुताउनु पर्ने कुरामा हतार निर्णय नगर्नुहोस्। तपाईं लामो समयबाट श्रापित महसुस गर्नु हुँदै थियो भने, आज तपाईं आशिष पाएको महसुस गर्नु हुनेछ।
कुंभ-भौतिक लाभ र विशेष गरेर मानसिक सुदृढताको लागि मनन र योग सुरु गर्नुहोस्। यो एउटा अर्को धेरै ऊर्जा प्रदान गर्ने दिन हो र अनपेक्षित लाभ हुने सम्भावना छ। परिवारका सदस्यहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुहोस्। तपाईंले उनीहरूलाई ध्यान दिनुहुँदैछ भन्ने महसुस गराउन उनीहरूको आनन्द र दुःखमा आफैलाई संलग्न गराउनुहोस्। आज तपाईंलाई जीवनमा साँचो प्रेमको सम्झना आउँछ. चिन्ता नगर्नुहोस्, समय अनुसार सबै कुरामा परिवर्तन आउँछ, तपाईंको रोमान्टिक जीवन पनि त्यस्तै हो। तपाईंले आफ्नो काममा ध्यान राख्नुभयो भने सफलता र पहिचान तपाइँको हुनेछ। आज तपाईं र तपाईंको जोडीले साँच्चै राम्रो खाना वा पेय लिनु हुनेछ, जसले स्वास्थ्यमा केही समस्या आउन सक्छ।
मीन -तपाईं आजको भावुक मुडबाट बाहिर निस्किन चाहनुहुन्छ भने विगतमा जानु आवश्यक छ। तपाईंको कार्डमा धार्मिक स्थल वा आफन्तको घरमा भ्रमण गर्ने सम्भावना देखिन्छ। तपाईंले राम्ररी विकास गरेकोले प्रेम जीवनले पनि एउटा मोड लिनेछ। आज काममा तपाईंले आफुलाई घृणा गर्नेलाई मात्रै “नमस्कार” भन्नुभयो भने तपाईंका लागि कुराहरू साँच्चै नै सुन्दर हुनेछन्। परमेश्वरले आफूलाई मद्दत गर्नेहरूलाई मद्दत गर्दछन् भन्ने तपाईं याद हुनु आवश्यक छ। विवाह यौनको लागि मात्रै हो भनेर भन्नेहरूले ढाँट्छन्। किनभने, आज तपाईंलाई साँचो प्रेम के हो भन्ने थाहा हुनेछ।
आज फागुन २५ गते
भोली फागुन २४ गते
आज फागुन २४ गते
आज फागुन २२ गते
भोली फागुन २१ गते
आज फागुन २० गते
भोली फागुन २० गते
आज फागुन १९ गते
आज फागुन १८ गते